Ngubani uBarbara Brylska kuthi? I-Biography uBarbara iqukethe iindima ezintle. Kodwa, kungakhathaliseki ukuba sisityebi seBrylska, thina, kaninzi kunokuba singabandakanyekanga, sidibanisa noMnyaka omtsha kunye "neNgqumbo yeHlabathi". Mhlawumbi kuphosakele ukuba i-biographie kaBarbara Brylska kuthi sincitshiswe ibe yinye indima. Kakade, kubaphulaphuli basePoland kwi-biography kaBarbara Brylska kukho imisebenzi enomdla eyaziwayo nothando. Kodwa yintoni esinokuyenza ukuba uBarbara kuthi kuthi nguNadia.
UBrylska akayena umdlali wesithombe omnye. I-biografi yalo mfazi ngumzekelo ocacileyo walo. NgoBarbara nje ngokumangalisayo wadlala indima kaNadia Sheveleva. UBrylska, ukumomotheka kwakhe, ukunyamezela, ukuthandana nokuthandana kwakhe kwakhunjulwa ngabo bonke abemi be-Soviet space. Mhlawumbi, i-biografi yakhe ayiyi kuba yinto enomdla kuthi, ukuba kungekhona kuye uNadia. Ngethuba lokuqala abaphulaphuli babona uhlaziyo luka-Eldar Ryazanov ngoJanuwari 1, 1976. Ngaloo nto ke sadibana noNadia kunye nomdlali we-actrice owenze-uBarbara Brylska. Kwiminyaka engamashumi amathathu anesithandathu, kwaye asinakukucinga ngomnyaka omtsha ngaphandle kwabantu abathandekayo nabemi bomthonyama baseZhenya, uNadi, iHippolyt kunye nabanye abalinganiswa abaye baba yizinto ezifanayo ezingabonakaliyo zomkhosi weqhwa, njenge-champagne, umthi weKrisimesi kunye nomnqumo. Enyanisweni, kwaba yimpumelelo emangalisayo ukuba ayifumaneki kubalingisi ngobusuku bonke. Kodwa ungakulibali ukuba ubusuku boNyaka Omtsha kusekhona umlingo, ngoko nayiphi na imimangaliso inokwenzeka. Kwaye kwavela noBarbara. Ngobunye ubusuku ilizwe lonke lifunde malunga nalo. Kwaye ubusuku obunye wathandana. Yaye oku, ngokwenene, luvuyo olukhulu. UBarbara waqonda oku. Ngokukodwa kuba yena, umfazi owakhula kwiminyaka emva kwempi, wayesazi iingxaki ezininzi kunye nobunzima. Ngoko ke, ndakwazi ukuyixabisa inwaba nenhlanhla ukuba uNobumba Omtsha woNyaka ka-1976 weza kuye.
Ukuqala kwendlela yokudala
UBarbara wazalwa ngoJuni 5, 1946. Intsapho yakhe, njengabanye abaninzi, behlala ebuhlwempu, kuba kuphela iMfazwe Yehlabathi Yesibili kuphela. Umama uBarbara wathola ubomi ngokuthunga. Uyise wakhe wayengumculi oqhelekileyo. Intsapho yaseBrylsky yahlukaniswa yi-conservatism kunye nobunzulu. Yingakho uBarbara engazange abizwe ngokuba ngumntu ongenakunqandwa. Ngokuchasene noko, ebuntwaneni nasebuncinaneni, kwakunokuthobeka kakhulu, kwanobunzima. Kodwa, nangona kunjalo, wayehlala emele kakhulu. Nangona, akumangalisi, kuba abazali bekufuneka basebenze rhoqo, ukuze uBarbara avele ebuntwaneni afunde ukuphendula. Kodwa akukho nto ayinakutshoyo ukuba intsapho yakhe ayithandi. Ngokuchasene noko, uMama noTata basebenzise onke amandla abo kunye nezibonelelo kwiinkwenkwezi ezigqityiweyo kwi-lyceum yobugcisa. Bambona intombi italenta kunye nomnqweno wobugcisa, ngoko baxhasa zonke iiminqweno kunye nokuqala kwesi sikhokelo. Ukongezelela, umlawuli we-lyceum, apho uBarbara afundela khona, ebona indlela eyenziwa ngayo i-talente encinane ekusebenzeni kwe-amateur, yaqinisekisa ukuba intombazana inenalente. Kuyimfuneko ukuba ahambe kwaye afake enye yeziko lemfundo ephakamileyo e-Poland - iLudz Higher School of Theater. Barabara wenza njalo. Waphumelela ngokuphumelela iimviwo waza wafumana imfundo ebalulekileyo. Kwaye emva koko, lixesha lokucinga malunga nento eya kuyenza ebomini. Nangona kunjalo, impendulo kulo mbuzo uBrylska wayesazi ukusuka ebusheni. Emva kokuba adlale indima ye-episodic kwi-movie "Kaloshi Injabulo", kwaye kwenzeka ngo-1958, uBarbara wagqibazela ukuba uya kuba ngumdlali we-movie wangempela. Injabulo enkulu ngaye yayiyinxalenye ebalulekileyo kwifilimu uJerzy Kavalerovich "uFaro". Emva kwayo, uBarbara wadlala kwiifilimu ezininzi zembali, i-melodrama yempi kunye nochungechunge lwe-TV. Ubuso bakhe baqaphela ababukeli basePoland. Nangona kunjalo, sele sele iphakathi kweminyaka engama-60, uBarbara wasuswa kakhulu ngaphandle ekhaya, kodwa ngaphandle. Ingabonwa kwiifilimu ezininzi eziveliswa yi-studio ye-studio ye-GDR. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kubo uBrylska naye wakwazi ukubonakalisa zonke iitalente zakhe aze aphile ebomini ama heroine athandwayo.
Uvuyo nosizi lobomi bomntu
Kodwa kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba, uBarbara, umsebenzi awuzange uphakame ngaphezu kwentsapho. Umzekelo, ngoku uyasuswa kwaye udlala kwimidlalo kuphela xa eqonda ukuba imali iphelile. Ewe, xa uBarbara ebengumncinci, wayenomdla, kodwa uthando lwaluhlala luhlala kuye ngaphandle kwegumbi lobomi kunomsebenzi. UBrylska uthi wayethanda amahlanu. Wayetshatile kathathu. Umtshato wokuqala wawudlulileyo kwaye ungonwabi. Kodwa kunye nomyeni wakhe wesibini, wayenebudlelwane obuhle. UBarbara wazala unyana wakhe nentombi yakhe. Yena nomyeni wakhe bathandana kakhulu kangangokuthi banikezela abantwana babo amagama: uLudwig noBarbara. Ibhinqa lomphefumlo ayizange ibone kubantwana. Yingakho, xa intombi yayineminyaka engamashumi amabini anesibini ubudala, iminyaka emithathu uBarbara wayengenakuphila. Le ntombazana yayingamashumi amabini ananye kuphela. Yena, njengomama, wadlala, ubuhle. Ubomi bakhe bephazamisekile ukuqhuma kweemoto kwaye oku kwakunzima kakhulu kuBrylsky. Ayaziwa ukuba unokusinda, kuba ibhinqa lalihlala licinga ngokuzibulala entlokweni yakhe, ukuba kungenjalo kwindodana yakhe. Wayemncinane kunodade wakhe kwaye wayefuna uthando kunye nokunyamekela. Ngoko uBarbara wafumana amandla okuhlala eLudwig. Kuze kube namhlanje, uhlala encedayo ngenkxaso ebalulekileyo ebomini.
Uhlala e nethemba
Kuze kube namhlanje, iBrylska ihombisa ubomi obunokuthula nokulinganisa. Ungummthikazi omhle, uyazi ukupheka iintlobo ezahlukeneyo zokutya, kwaye, ngendlela, uyakuthanda ukutya. Kodwa ngexesha elinye lihlala lilandela. Ngoko kubonakala kulungile. UBarbara akasoze azisola nayiphi na kwaye ayenzi izicwangciso ezinkulu ngekamva. Uzama ukuhlala kwaye ujabule ngalo mhla. Ubomi bakhe bekukho okuhle nokubi. Emva kokuphumelela kwe "I-Irony of Fate", abaphulaphuli basePoland bamkhwele nje ngabantu abangaziwayo baze bayeka ukuqonda. Kodwa, ngakolunye uhlangothi, baqhubeka bemthanda ngobudlova kwiSoviet Union. Ngoko ke, uBarbara wenza kwezinye iifilimi, kwaye wayehlala efumana uthando olufanelekileyo kunye nokufudumala kwabaphulaphuli ukuba bazive beyimfuneko kwaye befuna. Ngenxa yoko, uBarbara unombulelo omkhulu kwaye uhlala ekhangele phambili kwikamva.
Abafana abalishumi abatyebileyo kwihlabathi ngo-2011
Edita Piekha: malunga nobuchule nobomi
I-Burgers edibeneyo neMifuno
UPavel Free wazala nomkakhe
I-porridge porridge kwindawo eninzi
Ummbila iBhisikidi kunye namaBherries
Ii cookies zaseVenetian "Zaletti"
Indlela yokuzibandakanya ngokufanelekileyo kwisini somlomo
Ilayisi kunye namaqanda
Iimali zeenkwenkwezi zemali ze-2010 kuzo zonke iimpawu
Indlela yokubuyisela i-breast elasticity and shape
Imbali yam edabukisayo yokubeleka